Kuisa mari mune ecology, chimwe chinhu chinopfuura fashoni | Ehupfumi Zvemari
Kuisa mari mune ecology, chimwe chinhu chinopfuura fadhi
Imwe yemabhenefiti ekudyara ndeyekuti inogona kuitwa kubva pamazano akasiyana. Kubva pane yechinyakare kusvika kune yepakutanga uye inyowani uye izvo zvinogona kushamisa vanopfuura mumwe mushandisi. Asi hongu, imwe yeinonyanya kuratidza ndeye iyo ine ecology seicho chinangwa chayo chikuru. Uye zvakare, inogona kuendeswa kuburikidza nezvakasiyana zvigadzirwa zvemari, Pasina kuganhurirwa pakutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Neimwe nzira, iri imwe nzira yaunofanirwa kuita kuti kuchengetedza kunobatsira kubva zvino zvichienda mberi.
Chimwe chezvinhu zvinokwezva kupinza iyi modhi yekudyara ndeyekuti iwe unogona kunyange kubatsira nharaunda kuburikidza nemipiro yako yemari. Kusvika pakuti zvinowanda uye kuwanda kuti zvigadzirwa zvemari zvehunhu izvi zvioneke. Kubva munzira dzese, sezvo iwe uchizokwanisa kuona kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti ecology yave mari yemari inogona kubatsira kwazvo. Chii chimwe, inokodzera kwazvo zvimwe zviitiko kuti misika yemari inogona kusimukira.
Iko kupihwa kwekudyara nhaka yako mune ecology inovhara zvisingaverengeke mikana. Kubva kuiclass stock market investment kune mamwe mafomati akasarudzika, senge seti dhipoziti uye kunyanya mari yekudyara. Nzira nyowani inovhura kuitira kuti iwe uyananise nyika yekudyara nenzira yako yekunzwisisa hupenyu. Kuti iwe ugone kuzadzisa zvinangwa izvi zvaunoda, tiri kuzokupa iwe zvimwe zvezano zvaunopihwa nemisika yemari dzakasiyana. Zvirokwazvo mamwe acho anokwezva yakawanda yekutarisisa.
1 Ecology muhomwe
2 Zvigadzirwa zve ecological muUSA
3 Dzakakosha mari yekudyara
4 Mitero yakabatana neichi chikamu
5 Kuburikidza nemari yekuchinjana-yakatengeswa
6 Nongedzo yekuita neye organic
Zvingave zvishoma sei, ecology iripowo mumisika yemari. Kunyangwe ichokwadi kuti kubva kune yakashomeka nzira yekuremekedza kune mamwe matunhu. Inonyanya kumiririrwa nemakambani emagetsi anovandudzwa uye vanopa sarudzo dzinoverengeka. Ose ari mumatunhu emunyika uye mumisika dzakasiyana dzenyika. Mazhinji acho anobva makambani emagetsi kuyedza kuchinjika kune aya mamodheru ebhizinesi. Nekugamuchirwa kwakakosha nevashambadzi vadiki nepakati.
Aya maitirwo anopa mupiro wakawedzerwa uyo unovaita unakidze kwazvo kune ese profiles evaridzi. Kubva kune vane hukasha kune avo vanotsvaga nzira dzakawanda dzekuchengetedza. Panguva iyo kudzoka kwacho hakusi kuve kunoshamisa. Asi pane zvinopesana, vanofamba pasi pemahara akajairika. Iko imwe yemakambani akasarudza zvakanyanya simba rinowedzerwazve iri Iberdrola. Nyika-ye-iyo-hunyanzvi kana zvasvika pakushandisa iyi nyowani simba.
Zvigadzirwa zve ecological muUSA
Imwe nzira ndeye kuyambuka gungwa woenda kuUS equities. Nekuti zvirizvo, mune ino yakakosha yemusika makambani emakambani ayo akanyatso kubatana zvine hukama nenyika yeecology zvakanyorwa. Iko iko kukosha kwechikafu nezvigadzirwa zvinopa hunhu hwakakosha kumira. Iko kupi mazinga ekubatsira mune yekudyara anogona kuvandudzwa. Kunyangwe kuita uku kuchizosanganisira chakakura kuwedzera mumakomisheni inoshandiswa nemasangano emari.
Kana iwe uri fan of ecology, hapana mubvunzo kuti mumusika uyu we mari yakasiyana-siyana uchave nemikana mikuru yekuvandudza kudzoka pane yako mari. Kunyangwe kubva pane zvirevo zvakabatana zvakanyanya kumatekinoroji matsva. Pane kudaro, kukanganisa kwavo kukuru kuri pakuti ivo vanozove vashoma vanozivikanwa tsika uye kuti ivo havazokubvumidze iwe kujekesa makambani akasarudza iyi yakasarudzika bhizinesi modhi. Ivo varipowo mumisika yeEurope, asi pasina simba remisika yeAmerica.
Dzakakosha mari yekudyara
Chero zvazviri, chigadzirwa chakanakisa chinoratidza maitiro aya ndeimwe mari yekudyara. Iyo ndiyo nzira iri nyore yekuzviisa iwe mune ino nyowani chikamu. Muzviitiko zvakawanda kuburikidza nemakambani anotsigira vezvematongerwo enyika vanobatsira vezvematongerwo enyika. Asi zvakare kuburikidza nemari yemari zvinhu zvinovakirwa pane iyo Yakachena uye yakachena simba. Sezvazviri mune chaiyo kesi yemvura kana mhepo masosi. Ndiyo sarudzo yakajairika pakati pevashambadzi vadiki nepakati kuti vanyatso kuzviisa munzvimbo yesecology.
Kwete nekuti imari yezvinhu zvakasikwa ndiyo inobatsira zvakanyanya kupfuura mamwe ese. Asi, zvine chekuita nekushanduka kwezvinhu zvemari mumisika. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti mukati megore rapfuura avhareji purofiti yemari dzekudyara idzi yakasvika 8%. Kunyangwe zvisingawanzo kuratidza iwo iwo mapesenti, sezvazviri zvine musoro kuti iwe unogona kunzwisisa. Chero zvazvingaitika, inzira inonakidza yekuzvimisikidza muecology pasina zvakanyanya kunetsa uye nenzira yakapusa.
Mari yekudyara yeaya maficha inopihwa nemaneja akakosha pamusika. Nemamodeli ayo anotobatanidza kudyara nemamwe mafaera emari. Kazhinji kubva kuemaiti uye mari yakatarwa. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune yakanakisa mamiriro ekusiyanisa zviwanikwa zvakadyarwa. Inonyanya kugadzirirwa kuitira kuti iwe ugone kuchinjika kune ese marudzi ezviitiko, kusanganisira zvakanyanya kusanakira kumisika yemari.
Mitero yakabatana neichi chikamu
Iwe une dzimwe sarudzo dzekubatanidza kuchengetedza neecology. Chimwe chezvinhu zvakajairika chinogadzirwa neyakaiswa mari, asi mune ino kesi yakabatana neiyi yakasarudzika mari yemari. Iri izano rekuvandudza iyo isina simba purofiti inopihwa nezvigadzirwa izvi parizvino. Saka kuti iwe ugone kudarika iyo 1% nhanho mune mipiro yaunoita kuburikidza neaya ekuchengetedza mamodheru. Chii chimwe, iyo njodzi ichave yakadzikira zvakanyanya kupfuura iyo yezvimwe zvigadzirwa zvemari, inowanzo sunganidzwa nemari.
Chero zvazvingaitika, iwe unowana yakagadziriswa kudzoka gore rega. Nemashoko akasiyana ekugara kubvira kubva pamwedzi gumi nemaviri kusvika pamakumi mana nemasere. Nekudaro, iwe haugone kudzima mutero panjodzi yekubhadhara komisheni inodenha yeinenge 2% pamari yakaiswa. Kuchengetedzwa ndechimwe chezvinhu zvakajairika zveichi chigadzirwa chakasarudzika chinogadzirirwa kune ese marudzi ese saver. Iko kune imwe dziviriro profile inotungamira mune iyo kudzikama kwekuchengetedza kunokunda pane kumwe kufunga kune hukasha. Iwe unogona kubvumirana aya madhipi kubva pamwero wakadzikira kwazvo kune dzese dzimba, kubva ku3.000 euros.
Kuburikidza nemari yekuchinjana-yakatengeswa
ETFs inopawo mukana wekusangana nechikumbiro ichi kubva kuvadiki vepakati nepakati varimi. Asi kubva kune dzimwe nzira dzine hukasha sezvo ichi chigadzirwa chiri sanganisa pakati petsika dzekudyidzana mari pamwe nekutenga nekutengesa masheya. Izvi zvinoreva kuti michero yemubatsiro inogona kuve yakakwira kupfuura mune dzimwe nzira dzatakakudzidzisa. Chero zvazvingaitika, ruzivo rwakakura runodikanwa nekuda kwekuoma kwemhando iyi yekuchengetedza. Nekuti kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kusiya akawanda ma euro munzira.
Sezvo nemari dzekudyidzana, mafomati aya anowanzoisa mari mumakirasi emagetsi akasvibira. Kunyangwe mumakore achangopfuura ese emhando dzekudyara dzakabatana nemagetsi anovandudzwa ari kusimudzirwa. Imwe yemabhenefiti emari idzi dzekuchinjana-kutengeserana ndeyekuti inochinjirwa kune angangoita ese mafuremu enguva. Ipo, kune rumwe rutivi, ivo vanopa makomisheni ari kukwikwidza zvakanyanya kupfuura ayo akagadzirwa mumisika yemari. Nekudaro, icho chigadzirwa chakaomarara chemari kupfuura zvimwe zvacho.
Nongedzo yekuita neye organic
Kana iwe uchizosarudza iyi imwe sarudzo, hauzove nesarudzo kunze kwekuziva kuti haufanire kudyara mari nekuda kweicho chokwadi chekugara. Asi pane izvo, danho rako rinofanirwa kunge rakavakirwa pane chinangwa chekuita purofiti. Pane rimwe divi, usape yakakwira kana yakaderera kudzoka pane zvido zvemukati mayo. Zvakapesana neizvozvo, ichave yakatarwa neimwe nhevedzano yezvinhu zvinosanganiswa nekushanduka kwemisika yemari. Zvakare zvakanyanya kuoma kuteedzera sezvo ivo vachiuya kubva kumamwe misika ayo asingawanzo kuoneka munhau.
Chimwe chinhu chaunofanira kufunga nezvacho icho chinoreva mukana wekudyara. Nekuti mukuita, haisi yekudyara kwenguva pfupi, asi zvinopesana, inogona kushandiswa kune chero mamiriro ezvinhu mumisika yemari. Zvese zviri zviviri zvakakurisa uye mune zvisingafadze zvakanyanya kune zvaunofarira sediki uye wepakati investor.
Hazvishamisi kuti, kazhinji, zvinoenderana nekushanduka chaiko kwemari yemari iyi. Kusvika padanho rekuti iwe unenge uine dambudziko rakawanda kutakura rakadzika kuteedzera yakavhurika nzvimbo mune chero izvi zvirevo. Izvo zvakakoshawo kuti iwe uzive kuti sarudzo dzinopihwa nemisika yepasi rose dzakapamhamha kupfuura mukati medunhu redu. Nekuti pakupera kwezuva pane akawanda mazano iwe aunogona kusarudza kana iwe uchizopepa chikamu chenhaka yako muecology.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Kuisa mari mune ecology, chimwe chinhu chinopfuura fadhi
Maitiro ekutengesa imba
Zvingave zvinokuvadza Grifols kuve iyo yega yeCatalan kambani pane Ibex?